Tsara ho fantatra, fa ny 50% n'ny vola azonao dia andoavana hetram-panjakana avokoa.
20% IRSA, hetra alaina amin'ny karama mihoatran'ny 250 000ariary, mbola eo ny Ostie sy Cnaps, misy ampahany 1% aloan'ny mpiasa ary ny 5% alohan'ny mpampiasa amin'ny Ostie, raha 1% an'ny mpiasa ary 13% no aloa amin'ny Cnaps.
Etsy ankilany 20% ny TVA, alaina isaky ny mividy entana ianao, izany hoe mividy savony 500 ariary ianao, dia ny 100 ariary amin'iny an'ny fanjakana.
Izay mividy solika dia misy karazan-ketra alaina ihany koa, raha mividy lasantsy 1 litatra 4 200 Ar, dia ny 1 511 Ar ny hetra alaina (Taxes et Redevances 36%), raha gazoala 1 litatra amin'ny vidiny 3 550 Ar dia 968 Ar ny hetra alaina (27%), ny solika fandrehitra na pétrole lampant kosa dia 2 630 Ar ny litatra, ary 20 Ar ny hetra na 1% amin'izay an'ny fanjakana.
Izany hoe raha miasa 6 andro ianao hatramin'ny sabotsy, dia ny alatsinainy, talata, alarobia dia an'ny fanjakana avokoa izay, ny hatsebohanao ny alakamisy zoma ary sabotsy no anjaranao.
Raha lanianao amin'ny vendredi magnifique izany ny andronao anio zoma, dia ny 2 andro ihany no hivelomanao, raha mbola tsy miasa koa ianao ny sabotsy, dia 1 andro amin'ny herinandro ihany sisa ny miditra aminao. Raha mbola fady miasa talata gorôbaka, dia eny ambany tunnel sisa ahitana anao.